Sal 116, 12-1: NY OLONA NOVONJEN'ANDRIAMANITRA
1- Mieritreritra ny tokony hataony ho an'ny Tompo (and 12)
2- Maneho marika hita maso (fisaorana and 13-14)
3- Manana fandraisana matotra Aminy (and 15-16)
4- Manao asa vavolombelona any am-piangonana (and 17-19)
Lio 2, 25-35: NY MINO IZAY MANDRAY FAMONJENA
1- Tena mpivavaka (and 25)
2- Tarihin'ny Fanahy Masina (and 26-28)
3- Matoky ny Tenin'Andriamanitra (and 22-32)
I Kor 11; 23-26: JESOA KRISTY FAMONJENA AZO ANTOKA.
Isan'ny nanaitra tao amin'ny Fiangonana tao Korinto ny fananana fomba fijery tsy mitovy sy ny foto-pisainana samy manana ny azy. Niteraka fisarahana sy adi-hevitra teo amin'ny Kristiana ireny. Vahaolana tokana no nomen'ny Apostoly Paoly dia ny fampitodihana ny olona ho ao amin'i Kristy. Ny perikopa toriana eto dia maneho ny momba ny Fanasan'ny Tompo izay ahatsiarovana ny Tompo sy ny asam-pamonjena izay nataony ho an'ny olona. Izay heverin'ny olona ho famonjena ivelan'i Kristy dia famonjena mandalo sy mamitaka fa ny famonjena izay nataon'i Jesoa ihany no azo antoka. Nahoana? Jesoa Kristy famonjena azo antoka satria:
1- Manome fiainana ho an'ny olona rehetra.
Anankiray amin'ny olana novahan'i Paoly ao amin'ny epistily ho an'ny Korintiana ity olana mahakasika ny Fanasan'ny Tompo ity. Betsaka ireo manamaivana sy tsy mahalala ny maha sarobidy izany. Naverina mihitsy ny teny nataon'i Jesoa tamin'ny fanorenana izany. Voalaza fa tamin'ny alina nanorenana ny Fanasan'ny Tompo, ny olona sasany, isan'izany i Jodasy Iskariota, dia nisaina ny hamadika Azy. Ny olona nitady hevitra hamono ny Tompo fa Izy anefa tsy nihevitra ny hihemotra na handositra na hamaly faty. Izao ihany no sitrany: hizara fiainana ka hanolotra ny tenany sy ny rany ho famonjena ny olona rehetra tafiditra amin'izany ny mpamadika Azy.
Ry havana, misy hatrany ireo olona mandany andro amin'ny fanoherana ny Tompo amin'ny alalan'ny fandravana ny tetik'asan'ny Fiangonana, fisakanana ny fanapariahana Filazantsara sns...Te-hamonjy ireny olona ireny ny koa ny Tompo ka mitaona azy handray ny tena sy ny rany. Mahafinaritra ny Tompo satria eo amin'ny fotoan amadihana sy amonoana Azy no ikendreny fiainana sy fahavelomana ho an'ny olona na izay mitsangana ho fahavalony aza. Tena sitrany tokoa raha tapa-kevitra ianao androany hanolo-tena, hibebaka ary handray ny famonjena izay aina vaovao atolony, tsy misy famonjena izay azo antoka tahaka izay ao Aminy ka araraoty. Jesoa Kristy famonjena azo antoka satria:
2- Manome ny sarobidy.
Fomban'ny olona hifandao ny mifanolotra fanomezana mba ho fahatsiarovana. Jesoa Kristy manolotra ny tenany sy ny rany ary nanao ilay fanasana masina ho fanamarihana izany. Tsy niandry ny mpianatra hanolotra Izy na hiandry valiny. Mazava ny an'ny Tompo: manome ny sarobidy indrindra dia ny tenany sy ny rany. Manolotra tsy mandray takalony, fahasahiana hanome izay tsy foin'ny hafa. Iza tokoa mao no hahafoy ny tenany sy ny rany ho avotra ho an'ny mpanota sy ny mpamadika?
Fomba mahazatra ny olona ny manokana andro ho fahatsiarovana ireo olona nanao zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny firenena na sehatra hafa. Natao ho fianarana ireny olona ireny fa tsy mahavonjy. Mifanohitra amin'izany ny fanomezan'i Kristy: ahazoana fiainana mandrakizay (Jao 6,56). Tsy misy zavatra sarobidy azo ampitahaina amin'izany. Tsy zavatra tsotsotra no namonjen'i Jesoa Kristy antsika: tsy vola na harena, tsy volamena fa ny ra soan'i Kristy izay ambony lavitra noho ny fanatitra rehetra.
Ry havana, betsaka ireo Mpandray ny Fanasan'ny Tompo tonga manadino ny hasarotabidin'ny famonjena nataon'i Kristy, hany ka lasa mandray amim-pahazarana fotsiny na manao tsidi-pahitra, ary misy aza tapa-kevitra ny hoato fa voasarangotry ny rehaka momba izao fiainana izaona ny reharehan'izao tontolo izao izay famonjena eto an-tany tsy hihaotra ny zato taona izay heverina ho manan-danja eto an-tany dia mihelina sy mandalo ihany ka avereno amin'ny laoniny ny fanoloran-tena ary raiso amin'ny fo manontolo ny famonjena lehibe entin'ny Tompo ho anao.
Farany, aza miantehitra amin'ny hazo boboka na miantsampy amin'ny vahy maina ry havana. Tsy maintsy mila famonjena ianao fa tsy mavonjy tena. Voalaza taminao teo ny Mpamonjy azo antokan izay sady tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay (Heb 13,8). Fadio ny mangatak'andro. Anio dia anio, raiso ny famonjena atolony. Sahia manao hoe "Raiso ny tenako" no teninao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amena.